International Archives - Techip RELAY
Petit Kubhadhara: Kufumura nyanduri itsva yemimhanzi inogadzirwa umo iye anobhadhara mutero kuna Manu Dibango uye…
Nyika diki, kunyangwe ichinetswa nechirwere, ichienderera mberi nekuita mimhanzi ichitaura. Chokwadi, mazuva mashoma apfuura, muchengeti weCameroa akafumura nyanduri itsva yemimhanzi umo anobhadhara mutero kuna Manu Dibango uye…
Handsome Cristiano Ronaldo adzoka kudzidziswa!
Nhabvu nhabvu dziri kutanga zvishoma nezvishoma! Saka Cristiano Ronaldo akanaka kwazvo adzokera kudzidziswa! Cristiano Ronaldo adzoka kubva kuzororo! Chokwadi, mutambi wenhabvu akatangazve mitambo yekudzidzisa nhabvu! ..
PSG: Cristiano Ronaldo akaita sarudzo yeramangwana rake.
Sekureva kwaFoot Mercato, Cristiano Ronaldo angadai akaita sarudzo yake yeramangwana rake. Kusvika kwake kuPSG kwaigona kunyatsoitwa zvinoenderana nevezvenhau. Mazuva mashoma apfuura, OL yakawana basa rekubvisa Cristiano Ronaldo's Juventus Turin kubva ku ...
Rapper Félicity Ben Rejeb Mutengo anogadzirisa hunyanzvi hwemavhidhiyo emimhanzi - Jeune Afrique
Mukati memakore maviri, iyo Franco-Briteni-Tunisian Félicity Ben Rejeb Price akaisa chimiro chake paFrance rap. Mufananidzo wemukuru ane mafungiro asina kuvharwa. ...
MTN inosiya Syria, iri kuronga kubva kuAfghanistan uye Yemen, asi icharamba iri muIran
MTN Group iri mukukurukurirana kwepamberi neTeleInvest kuti itengese zvikamu makumi manomwe neshanu kubva muzana zveMTN Syria uye kubuda nyika iyo yanga ichinetsana nezvombo kubva 75. Boka remafoni ekuSouth Africa riri kufungawo nezvekubva kuAfghanistan uye…
1 2 3 ... 225 chinotevera